Drum hita, Silicone hita, Cartridge hita, Insulation Mabhachi - Pamaens
Heating & kuputira zvinogadzirisa, chete iwe
Shanghai PAMAENS TECHNOLOGY CO., LTD unyanzvi ari R & D, kugadzirwa uye rokutengesa simba-rokuponesa kudziyisa uye kuputira zvigadzirwa. PAMAENS inopa yokugadza, kurovedza uye pashure-sale rimwe-chemabhazi basa. PAMAENS rava mutungamiriri mumunda chikumbiro kuti maindasitiri simba-rokuponesa kudziyisa michina kuChina uye kunze.
zvigadzirwa dzedu huru dziri kusanganisira kuputira Mabhachi, tangi & Drum Heaters, michini Heaters, katuriji Heaters, coils Heaters, tubular Heaters, zvedongo bhendi hita, naMika bhendi hita, vakakanda-mu hita, mhepo dzaserera hita uye mvura dzaserera bhendi Heaters etc.
PAMAENS vawana ISO9001 CE uye RoHS certificate. Pachirehwa kunyatsoteerera bvunzo uye kudzora ose chete chikamu zvigadzirwa uyewo ose kugadzira danho. The zvigadzirwa vanotengeswa Europe, American, Middle East, South Eastern Asian, Australia, Japan, Russia etc.
PAMAENS ane kuzviomesera yepamusoro kudzora mamiriro zvinhu sourcing, kugadzira kubudiswa, uye zvinogadzirwa yokuedzwa. We chandagwinyira kushandisa yepamusoro yakatsvuka zvinhu uye ongorora zvose zvinhu tichashandisa.
Our PAMAENS kambani, ane ISO 9001, CE zvitupa uye RoHs zvitupa kuti dzakawanda zvinhu zvedu.
boka redu, PAMAENS, harisi chete mugadziri, tiri wakachenjera uye yokuvaka. Tatanga zvinopa kudziyisa negadziriso epurasitiki muitiro Mazinga kubva 2005, uye muna 2012, tatanga kupa simba okuponesa negadziriso yakakwirira simba unoparadza epurasitiki indasitiri.